HORDHAC: Arsenal vs Leicester City….(Waa markii ugu horreysay taariikhda uu JIMCO furamayo Premier League) – Gool FM
HORDHAC: Arsenal vs Leicester City….(Waa markii ugu horreysay taariikhda uu JIMCO furamayo Premier League)
Byare August 11, 2017
(London) 11 Agoosto 2017. Waxaa caawa furmaya xilli ciyaareedka cusub ee Premier League iyadoo ay Arsenal garoonkeeda Emirates Stadium ku soo dhaweyn doonto Leicester City.
Gunners ayaa kulanka dheeli doonta iyadoo ku soo guuleysatay Community Shield, waxayna garoonka soo gali doontaa iyadoo kalsooni badan qabta xitaa haddii ay shaki ku jirto taam ahaanshaha xiddigo dhowr ah.
Inay kaalinta 5-aad ku dhammeysteen kal ciyaareedkii tagay ayaa ka walax ah inaysan ka soo muuqan doonin Champions League, wiilasha Wenger ayayna ka go’an tahay inay saxaan qaladkii ka dhacay fasal ciyaareedkii tagay.
Kulanka Furitaanka PL: Arsenal Vs Leicester City:
Garoonka: Emirates Stadium.
Saacada: 9:45pm habeenimo waqtiga Geeska Afrika.
Garsoore: Mike Dean.
Alexis Sanchez ayaa seegi doona labada kulan ee ugu horreeya Premier League sababo la xiriira dhaawac dhanka caloosha ah, halka Mesut Ozil, Aaron Ramsey iyo Per Mertesacker dhawaan la wada filayo inay taam noqdaan kaddib tababarka buuxa ay qaateen shalay.
Francis Coquelin ayaa isagu maqnaanaya labo usbuuc, halka xiddigaha waqtiga dheer maqan ee Gabriel iyo Santi Cazorla ay weli usbuucyo u soo jiraan inay dib ugu soo laabtaan tababarka kooxda koowaad.
Lucas Perez uma badna inuu kulankan ku lug lahaan doono madaama uu warqad codsi rasmi ah u gudbiyay kooxda si uu uga tago,
Laurent Koscielny wuxuu kulanka ku seegi doonaa ganaax kaddib kaarkii casaa uu qaatay dheeshii ugu dambeysay PL ee kal ciyaareedkii tagay kolkaa ay la dheeleen Everton.
Tababaraha Leicester City Craig Shakespeare ayaa heysta dooqyo badan ay tahay inuu ka fikiro kulanka caawa iyadoo saxiixyadiisa cusub ee Kelechi Iheanacho, Harry Maguire, Vicente Iborra iyo Eldin Jakupovic ay dhammaan dood ku jirto inay ku soo bilowdaan.
Xiddiga bartilmaameedka u ah Chelsea ee Danny Drinkwater iyo daafaca Robert Huth ayaa labaduba seegaya kulanka sababo dhaawac.
Riyad Mahrez oo ay u wada suxul duubanayaan Arsenal iyo Roma ayaa af cad kooxdiisa ugu sheegay inuu doonayo inuu tago.
Arsenal ayaa guuleysatay kulankasta 10kii kulan ee ugu dambeeyay Premier League ay gurigeeda kula dheesho Leicester City, waana waqtigii ugu dheeraa ay koox Home keeda kaga adkaato.
Gunners ayaa guuleysatay kaliya hal kulan 7-dii kulan ee ugu dambeysay kulamadeeda furitaanka Premier League, waxaa laga adkaaday saddex kulan afartii kulan ee ugu dambeysay (Hal Guul, 3-guul darro iyo 3-bar baro).
Arsenal waa kooxda ugu badan ee urursata Kaararka cas kulamada furitaanka Premier League 6-jeer, Laurent Koscielny ayaana qaatay labo ka mid ah saddexdii ugu dambeysay. (2010-11 v Liverpool, 2013-14 v Aston Villa)
Dhaliyaha cusub ee Arsenal Alexandre Lacazette ayaa 91 gool ka soo dhaliyay horyaalka France afartii sano ee ugu dambeysay waana midka ugu badan muddadaas.
Waa markii ugu horreysay taariikhda uu JIMCO furamayo Premier League taariikhda 129-sano.
Safka laga yaabo inay Arsenal ku soo gasho caawa:
Abdisamed Mohamed Hassan
“Ronaldaha iminka uma xirfad badna sida Ronaldihii hore oo kale laakiin…”
SAWIRRO: Paulo Dybala oo soo bandhigay maaliyadiisa Lambarka Buuxa